Ity no doka voalohany ataon'ny Apple ho an'ny Oscars | Vaovao IPhone
Hetsika iray hafa ary fanambarana iray hafa. Apple dia tsy te-hanadino ny fotoana hanatrehana amin'ny fomba iray manokana mandritra ny gala Oscars izay hatao anio hariva. Ora vitsivitsy aorian'ny fifantohan-tsaina rehetra dia ny tTeatra Losby Dolby, ny orinasam-paoma dia namoaka doka vaovao miaraka amina lohahevitra tena mifanaraka amin'ny fotoana izay hiainana anio hariva amin'ny fety sarimihetsika mahafinaritra.
Ny fanambarana izay voarakitra an-tsoratra miaraka amin'ny a iPad Air 2, notantarain'i Martin Scorsese, feo tena manokana nomena ny daty namoahana ity dokambarotra fahitalavitra ity. Mandritra ilay horonantsary dia hitantsika ny fanoloran-tenan'ny mpianatra isan-karazany avy amin'ny Tisch School of the Arts amin'ny famoronana atiny audiovisual miaraka amin'ny takelaka misy an'ny orinasa.
Saingy, tena namboamboarina ve ny safidin'ny iPad? Herinandro vitsivitsy lasa izay dia afaka nahita ny valiny ara-bola nataon'i Apple izahay tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona, izay nampiseho angona somary mampiahiahy momba ny iPads. Araka ny hitantsika, ny varotra an'ireo fitaovana ireo Nihena be izy ireo raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa, ho tombontsoan'ny iPhones vaovao.
Mahatonga antsika hieritreritra fa, ankoatry ny iPad nanompo mba hanaovana ny atiny aseho amin'ny horonantsary, Apple dia te hanome izany fomba izany mazava tsara manamafy ny fisian'ny iPad eo an-tsena ary asehoy azy io ho toy ny vokatra izay mbola tokony ho raisina ary koa, manamafy ny varotra.
Ankoatry ny fandraisam-peo miaraka amin'ny iPad Air 2, ny dokam-barotra koa dia novaina tao anatiny, izay nampiasana ny rindranasa GarageBand, VideoGrade, ary drafitra farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Apple Debuts Oscars Doka Voasoratra Amin'ny iPad Air 2 Ary Notantarain'i Scorsese
Ny mpamorona iray dia mahatonga ny Android Wear hifanaraka amin'ny iOS